आर्मीको बलियो डिफेन्स- खेलकुद - कान्तिपुर समाचार
सहिद स्मारक लिग
आर्मीको बलियो डिफेन्स
मंसिर १४, २०७८ राजु घिसिङ
काठमाडौँ — सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो चरणसम्मको प्रदर्शन हेर्ने हो भने डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र नै सबैभन्दा राम्रो टिम देखिएको छ । यो सिजन नाम चलेका युवा, अनुभवी र विदेशी खेलाडीको लामो सूची बनाएको क्लब मछिन्द्र नै हो । तैपनि मछिन्द्रले दशरथ रंगशालामा आर्मीको चुनौती पन्छाउन सकेन ।
सोमबार गोलरहित सकिएको खेलबारे मछिन्द्रका प्रशिक्षक प्रवेश कटुवालले भने, ‘उपाधि जित्ने होडका दुई टिमबीचको महत्त्वपूर्ण खेलमा सोचेअनुरूप खेल्न सकेनौं । पहिलो हाफमा पाएका दुई अवसर उपयोग भएन र बराबरीमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो ।’
रञ्जित धिमालको पासमा नुर्लान नाभरुजोभको ‘ट्यापिङ’ मा आर्मीका गोलकिपर विकेश कुथुले मुस्किलले बल रोक्दै २६ औं मिनेटमा मछिन्द्रलाई अगाडि बढ्न रोकेका थिए । त्यसैमा सुनील बलले प्रहार गरेका थिए । यसमा विकेशले राम्रो बचाउ गरेपछि सन्तोष तामाङले गोललाइनबाट बल क्लियर गरिदिए । त्यसबेला विंगर सुदील राईले चोट बोक्दै मैदान छाडेपछि आर्मी १० खेलाडीमा खेलिरहेको थियो ।
निर्धारित ९० तथा इन्ज्युरीको आठसहित कुल ९८ मिनेटसम्म बलमाथि पकड राख्न मछिन्द्र सफल भयो । तर टोलीका हरेक प्रयासमा बल आर्मीको पेनाल्टी क्षेत्र वरिपरि पुगेपछि पूर्णविराम लाग्थ्यो । अर्थात्, आर्मीको डिफेन्स संगठित देखियो र राम्रो प्रदर्शन गर्‍यो । यसबारे प्रशिक्षक कटुवालले भने, ‘आर्मी राम्रो टिम हो । उसको फिटनेस राम्रो हुन्छ र सधैं ‘सेट टिम’ हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘आर्मीविरुद्ध जहिले गाह्रो हुन्छ, जुनै टिमलाई पनि गाह्रो हुन्छ । उसले पुलिससँग भन्दा (पहिलो चरण) धेरै राम्रो खेल्यो, उत्कृष्ट खेल्यो ।’ उनको टिमले पहिलो चरणमा सुनीलको दुई गोलसँगै एनआरटीलाई २–१ ले हराएको थियो भने आर्मीले पुलिससँग १–१ खेलेको थियो ।
मछिन्द्रले यही दशरथ रंगशालामा पछिल्लो संस्करण (२०७६ साल) को अन्तिम खेलमा आर्मीलाई १–० ले हराएर पहिलोपल्ट लिगको उपाधि जितेको थियो । उक्त खेलमा मछिन्द्रलाई जित अनिवार्य थियो भने आर्मीलाई हार टार्न सके उपाधि पक्का थियो । यस्तोमा मछिन्द्रले सफलता हात पारेको थियो । मछिन्द्रले सोमबार त्यो हारको बदला लिन चाहेको थियो । यसपालि दोस्रो चरणमा यी दुई टिम भिड्नुपर्‍यो । प्रस्ट तीन अंक जोड्ने अभिायनमा रहेका दुवै टिमको प्रतिस्पर्धा केही ‘फिजिकल’ पनि भयो ।
लगातार दोस्रो बराबरीपछि आर्मीका प्रशिक्षक नवीन न्यौपानेले भने, ‘तीन अंक धेरै महत्त्वपूर्ण थियो । हामीले जसरी पनि लिन ३ अंक सकेको भए हामी अगाडि जाने थियौं । तर, अझै पनि केही बिग्रेको छैन ।’ एक अंकमा सन्तुष्ट नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले डिफेन्समा धेरै राम्रो खेल्यौं । तर, आक्रमणमा संयोजन मिलेन । स्कोरिङको स्पष्ट अवसर बनाउन सकेनौं । ७० मिनेटपछि आक्रमणमा अघि बढ्ने योजना थियो । तर, दुई खेलाडी पहिलो हाफमै घाइते भएपछि गाह्रो भयो । ७० मिनेटपछि ३ खेलाडी परिवर्तन गरेपछि एट्याकिङमा राम्रो भयो तर मौका उपयोग गर्न सकेनौं ।’
डिफेन्डर विकास खवास र फरवार्ड नवयुग श्रेष्ठलाई चोटका कारण गुमाएको आर्मीले घाइते भएका सुदीलको स्थानमा २८ औं मिनेटमा जगजित श्रेष्ठलाई मैदानमा पठाइएको थियो । विंग्स ब्याक सुमन अर्यालले पनि चोटकै कारण पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमै मैदान छाडेका थिए । उनको स्थान टेकबहादुर बुढाथोकीले लिए । त्यसैले आर्मीले खेलाडी परिवर्तनको अन्तिम अवसर (तेस्रोपल्ट) मा डिफेन्डर विमल पाण्डे, मिडफिल्डर विवेक बस्नेत र फरवार्ड जर्जप्रिन्स कार्कीलाई निकाल्दै डिफेन्डर युद्ध शाही, मिडफिल्डरद्वय टंक बस्नेत र दिनेश हेन्जनलाई मैदानमा प्रवेश गराइएको थियो । त्यसपछि मात्रै आर्मीले मछिन्द्रमाथि केही दबाब दिएको थियो ।
‘स्कोरिङमै समस्या छ,’ आर्मीका प्रशिक्षक न्यौपानेले भने, ‘फोकस स्कोरिङमै गरिरहेका छौं । तर, त्यो गेममा आइरहेको छैन । यसले फरक पार्छ । कुरा उपाधि होडको गर्ने तर यता गोल नगर्ने हो भने औचित्य नै हुँदैन ।’ उनले आर्मीको ‘हाई–इन्टेन्सिटी’ मा खल्ने शैलीमा जगजित अभ्यस्त भइनसकेको पनि बताए ।
मछिन्द्रले दोस्रो हाफमा मनीष डाँगी, विमल र मिडफिल्डर उत्सव राई मैदानमा प्रवेश गरे पनि गोल निकाल्न सकेन । मछिन्द्रका समस्या पनि स्कोरिङमै भएको प्रशिक्षक कटुवालले भने, ‘हामीसँग विशुद्ध स्ट्राइकर नभएकाले पनि गोल गर्न नसकेको हो । हामीलाई सेन्टर फरवार्डको खाँचो छ । रेजिन सुब्बा (चोट लागेका) लाई अझै एक महिना लाग्छ । विमल (घर्तीमगर) पूर्ण फिट छैनन् । विदेशी पनि विशुद्ध सेन्टर फरवार्ड होइनन् । मैत्रीपूर्ण खेलमा ह्यामस्ट्रिङमा समस्या भएका नुर्लानले शतप्रतिशत दिन सकेका छैनन् । अभिषेक (रिजाल) ट्रेनिङमा राम्रो गरे पनि लिगका दुईटै खेलमा खासै खेल्न सकेका छैनन् ।’
आर्मीसँग मछिन्द्रले अंक बाँडेको प्रत्यक्ष फाइदा मनाङ मर्स्याङ्दीलाई भयो । दोस्रो चरणको समाप्तिमा शतप्रतिशत जित निकाल्ने एक्लो टिम बनेको मनाङ ६ अंकसहित शीर्षस्थानमा छ । आर्मीसँग रोकिएपछि मछिन्द्र ४ अंकमै
सीमित भयो ।
सोमबारको पहिलो खेलमा एनआरटीविरुद्ध गोलरहित नतिजा निकालेको ब्रिगेड ब्वाइजसँगै संकटा, पुलिस र सातदोबाटो युवा क्लबले पनि ४–४ अंक जोडेका छन् । दुवै खेल हारेका एपीएफ र जावलाखेल रेलिगेसन क्षेत्रमा छन् ।
प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०७:२३
प्रतिनिधिले जानेको, नेताले नछानेको व्यक्ति हुँ : बिन्दा पाण्डे
'पुरूष भएर जन्मँदा उत्कृष्ट, महिला भएर जन्मँदा त्योभन्दा अलि तल, लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान बनाउँदा अमानवीय व्यवहार गर्ने व्यक्ति नेतृत्व तहमा अझै हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ ।'
मंसिर १४, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — एमाले महाधिवेशनमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने माग गरिरहेका महिला नेताहरुमा उत्साह घटेको छ । सहमतिका नाममा पदाधिकारीमा महिला सहभागिता अपेक्षित नभएको गुनासो आइरहेकै बेला नेता बिन्दा पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :
पदाधिकारीमा एकतिहाइ महिलाको दाबी थियो, त्यो त भएन नि ?
निर्वाचनमा जाने स्थितिमा एकतिहाइ उम्मेदवारी दिने तयारी थियो तर जान पाएनौं । हलले सूची तयार गर्ने सर्वाधिकार अध्यक्षलाई दियो । उहाँले जोजो सहज हुन्छन्, उनीहरूलाई टिममा राख्नुभयो । त्यसको विपक्षमा जानुको खास अर्थ थिएन । हलमा प्रस्तुत भएको सूचीमा अरूले फाराम भर्ने भनेको असहमति देखाउन हो । हामीले जुन सहभागिताको कुरा गरेका थियौं, त्यो असहमति देखाउन होइन । त्यो पदमा रहेर काम गर्न सक्छौं भनेर दाबी गरेका हौं । सबै क्षेत्रमा काम गर्ने महिलामा एकता गरौं भनेका थियौं, त्यो भएन । त्यो
कमजोर पक्ष पनि रह्यो । महाधिवेशन स्थलमा आइसकेपछि जुन दाबी गरेका थियौं, अधिकांश प्रतिनिधिले ठीक गर्नुभयो भनेका थिए । निर्वाचन भएको भए हामी सफल हुन्थ्यौं । कसरी ?
तीन साताअघि महिला सहभागिताको कुरा के छ भनेर शीर्ष नेतालाई सोधेका थियौं । क्लस्टरमा ७३ जना थियो, २ जना पुगेन । निर्वाचन आयोगका साथीहरूले ७५ पुर्‍याउनुपर्छ भन्नुभयो । त्यसबेला एक जना पदाधिकारीमा आउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो । हामीले दाबी गर्नुपर्छ, काम गर्न सक्छौं भनेर पार्टीले थाहा पाउनुपर्छ । महाधिवेशनबाट जिम्मेवारी लिएर काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले दाबी गर्‍यौं । त्यो कुरा पार्टीभित्र र बाहिर सन्देश थियो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हलमा सूची प्रस्तुत गर्दा किन विरोध गर्नु भएन ?
मैले जुन पद (उपमहासचिव) दाबी गरेको थिएँ, निर्वाचन गरे त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेर राम्रै परिणाम निकाल्छु भन्नेमा म ढुक्कै थिएँ । हामीले सूची बनाउँदा आउँछ भन्ने अपेक्षा थिएन । निर्वाचन भएको भए पाँच जनाले उम्मेदवार दिने तयारी गरेका थियौं, पाँचै जना प्रतिस्पर्धामा जान्छौं भन्नेमा हामीलाई विश्वास थियो ।
तपाईं पदाधिकारीमा किन पर्नु भएन ?
प्रतिनिधिले जानेको, नेताले नछानेको व्यक्ति हुँ म । अधिकांश प्रतिनिधि साथीको पछि नहट्नुस् भन्ने सन्देश थियो । तीन जना महासचिवमध्ये मैले उम्मेदवारी दिन पाएको भए नतिजा सकारात्मक आउँथ्यो ।
तपाईंलाई अन्याय भएको जस्तो लाग्दैन ?
म अन्यायविरुद्ध जुझ्ने भनेर आन्दोलनमा लागेको हुँ । जुन समुदायको कुरा उठाउँछु, त्यो समुदायले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ है भनेर भनिराख्छ नि । पुरुष भएर जन्मँदा उत्कृष्ट, महिला भएर जन्मँदा त्योभन्दा अलि तल, लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान बनाउँदा अमानवीय व्यवहार गर्ने व्यक्ति नेतृत्व तहमा अझै हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्छ । पितृसत्ताको जडलाई हाम्रो नेतृत्व तहले हटाउन सकेको छैन । एकतिहाइ महिला सहभागिताको कुरा उठायौं, शीर्ष नेतृत्व तहले महिला साथीहरूलाई ‘धेरै महिलावादी नहोऔं’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदा उहाँहरूको पितृसत्तामा धक्काचाहिँ लागेको छ । तर जुन तहको धक्का लाग्नुपर्थ्यो, हाम्रो आन्दोलनले दिन सकेको छैन ।
नेताहरूको चाकरी गर्ने रोग महिलाहरूमा पनि सरेको हो र ?
योचाहिँ समाजको एक खालको प्रवृत्ति हो । यसलाई लिंग छुट्याएर हेर्न हुँदैन । तर अहिलेको संस्कार वरिपरि घुमिराखेर झुकेर नमस्कार गरिदिएदेखि, प्रतिकार नगरिदिएदेखि, नेतृत्वले जे भन्छ, त्यसलाई हस् हजुर भनेपछि ती व्यक्ति नजिकको कार्यकर्ता हुने देखिन्छ । ती व्यक्तिले दिएको जिम्मेवारीको काम गर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ ।
अझै महिला सहभागिता बढ्ने सम्भावना छ ?
महाधिवेशन हलको अनुमतिअनुसार अध्यक्षले आफूलाई काम गर्न सहज हुने टिम बनाउनुभयो । नवौं महाधिवेशनदेखि नै यो टिम भयो भने मलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो भनेर अघि बढाइएको तर त्यतिबेला सफलता नपाएका साथीलाई अहिले तत्तत् ठाउँमा समावेश गरे टिम बनाउनुभएको छ । स्थायी र पोलिटब्युरो बनाउँदा आफ्नो सहजताका आधारमा टिम बनाउनुस् तर परिणाम निकाल्नुस् भन्छु म ।
राखेप कर्मचारीको माग ‘बाधा फुकाउ’
अर्जेन्टिनाले चिलीलाई २-१ ले हरायो
मैत्रीपूर्ण खेलमा जितको खडेरी
इरान लगातार तेस्रो पल्ट विश्वकपमा छनोट
क्यानको ग्रेडमा परे ३६ खेलाडी
अस्ट्रेलियन ओपन : बार्टी र कोलिन्स फाइनल भिड्ने